Ehlabathini elungileyo, asisoze sinoxhala malunga nokutshintsha amajoni ewebhu – indawo yethu iya kuhlala isonwabile kwindawo ekhoyo yokubonelela ngumbonelo ngezihlandlo ezinkulu, iindleko ezifikelelekayo, kunye ne-100.
1.2 I-2- Indawo poicelo sokufuduka kunye neenkcukacha zewebhu
1.3 3- Sjellja e sipërme e indawo yangaphambili kwaye
2.1 1- Thenga umphathi omtsha wewebhu
2.2 I-4- Icacisa i-DNS poikhululo kumamkeli wakho omtsha wewebhu
Thenga kwaye wenze i-akhawunti entsha ibambe,
Shkarkoni në skenë / URL aktrimin / URL akoma,
Ukusingathwa kwewebhu lushishini olukhuphisanayo- iinkampani zokubamba zenza konke okusemandleni ukuphumelela abathengi abatsha. Iinkampani ezininzi zokubamba, kubandakanya ezinye ezinkulu endizicebisayo, zibonelela ngenkonzo yokufuduka kwewebhusayithi yasimahla kubathengi abatsha. Konke okufuneka ukwenze kukufuna ukufuduka emva kokubhalisa kunye nomnikezeli omtsha kunye neqela labo lenkxaso liya kukhathalela ukuphakamisa ubunzima.
Nantsi në ekufuneka uyenzile ukuba uza kolu khetho:
A2 Hosting -Uyaziwa ngesantya kunye nokuthembeka, ukwabiwa okwabelwana ngakho kuqala kwi- $ 3.92 / muaj.
GreenGeeks -I-web-ethandekayo ju-web host, ukuphuculwa okukhulu kwintsebenzo yakutsha nje yokubamba.
InterServer -Iwebhusayithi entsha esekwe kwiJersey, ayibizi amaxabiso (5 $ / muaj) ngexesha lokuvuselela.
Pritja për lëvizje Umgcini wewebhusayithi omkhulu onengxelo engaphezulu kwengxelo ye15 yeminyaka.
Hosted -Ukusebenza okuhle kakhulu kunye nexabiso elikhulu-ukusingathwa okwabiweyo kuqala kwi- 2,95 $ / muaj.
I-2- Indawo poicelo sokufuduka kunye neenkcukacha zewebhu
Umzekelo: Pritja për lëvizje
Ukuqalisa ukudluliselwa kwesayithi kwi-InMotion Hosting, ungene ngemvume kwiDashboard yeDashboard> Usebenziso lwe-Akhawunti> Isicelo soTshintsho lweWebhusayithi. Cofa apha ukuze uqalise ukufuduka kwesayithi kwi-InMotion ngoku.
Unokucela inkonzo yeGreenGeeks indawo yokufuduka emva kokuthenga. Ukuqalisa ukufuduka, ngena kwi-akhawunti yakho yeGreenGeeks yeAkhawunti> Inkxaso> Isicelo sendawo yokufuduswa kwesiza> Khetha inkonzo> Nika ulwazi olusisiseko lweakhawunti (kumamkeli wakho wakudala) njengepaneli yolawulo ye-URL, ubungqina beakhawunti. Qaphela – Inkonzo yokufuduka kwesiza yeGreenGeeks ayibandakanyi një ukuhanjiswa kwe-cPanel, kodwa nokufuduka kwiqonga lePlesk.
3- Sjellja e sipërme e indawo yangaphambili kwaye
Po, yiyo yonke në ekufuneka uyenzile.
Ayikho impazamo yedatha yokuxubusha. Ayikho i-imeyile ju-akhawunti yokufuduka. Kulula nje nge-pie.
1- Thenga umphathi omtsha wewebhu
Ngokufanelekileyo kufanele ukuba wazise iindwendwe zakho kunye / okanye abathengi ukuba ufudukela kumnxibelelanisi omtsha wewebhu, kunye nolwazi malunga neeyure owenza ngalo ukutshintshela. Yinto elungileyo ye-PR yokwenza rhoqo ukwenza uhlaziyo lwesimo kumaxesha eendaba zentlalo ukugcina abathengi bakho benolwazi. Kwaye kwakhona, cinga ngokubuza abasebenzisi bakho ukuba bangatyeleli iwebhusayithi yakho ngexesha lokufuduka ukunciphisa umthwalo kwinkqubo kunye nokuthintela iintloko ezongezelelweyo zenkonzo yabathengi.
Uya kunikwa inqanaba malunga nokuba iitafile zilungiswa kwaye phezulu kwesikrini sakho kufuneka sithi "umbuzo wakho we-SQL uphunyezwe ngempumelelo".
I-4- Icacisa i-DNS poikhululo kumamkeli wakho omtsha wewebhu
Irekhodi yakho ye-DNS luhlu "lwemiyalelo" ecacisa apho ukuthumela umsebenzisi; Ukuhambisa irekhodi yakho ye-DNS kumaseva amatsha kuqinisekisa ukuba iindwendwe ziya kufumana indawo yakho njengoko ifunyenwe, kunokuba ufumane impazamo okanye ilahlekise. Le nyathelo elibalulekileyo – qiniseka ukuba ufumana ulwazi olungileyo lwe-DNS kwi-host host yakho entsha.
Kwi-web hosting kunye negama lesizinda
Indlela yokukhetha host-i i faqes së internetit
Ukuphathwa kweWindowsPress që të presë